कंगोमा फेरि देखियो इबोला संक्रमण,नियन्त्रण गर्न ९८ मिलियन डलर आवश्यक
जनतापाटी बिहिवार, श्रावण १६, २०७६, ०७:२९:०० मा प्रकाशित
कंगो । इबोलाको दोस्रो केस फेला परेको पुष्टि गरिएको छ । रुवान्डासँग सीमा जोडिएको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा इबोला फेला परेको बीबीसीले जनाएको छ । जसले गर्दा निकै ठूलो संख्यामा इबोलाको संक्रमण फैलनसक्ने बताइएको छ । करिब २० लाख मानिसहरुको बसोबास भएको कंगोको गोमा इलामा उक्त भाइरस फेला परेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सन् २०१८, अगस्टमा पहिलोपटक देखिएको इबोलाको संक्रमणबाट १६ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा सबभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा रहेका छन् । गत साता विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा आपतकाल’ को संज्ञा दिएको थियो । यो डब्लुएचओले जारी गरेको उच्च तहको खतराको संकेत हो । यसअघि चार पटकमात्र यस्तो संकेत जारी गरेको थियो ।
सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्मको अवधिमा इबोला संक्रमणका कारण पश्चिमी अफ्रिकामा करिब ११ हजारको ज्यान गएको छ ।
गोमाको अवस्था के छ ?
इबोलाले कंगोका दुई वटा प्रान्त उत्तरी किभू र इचुरीमा बढी असर गरेको छ । गोमा उत्तरी किभूको राजधानी हो । जसको सीमा रुवान्डाको गिस्नेयी सहरसँग जोडिएको छ । अहिलेसम्म उक्त भाइरस गोमाको उत्तरी इलाकामा परने बेनी र बुटेम्बोलगायतका ग्रामिण इलामा मात्रै देखिएको छ । यही महिनाको पहिलो साता गोमा सहरका एक पुजारीको इबोलाका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसयता भने इबोला संक्रमणका कारण अन्य कुनै मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ ।
मंगलबार उत्तरी किभूमा खटिएको उद्धार टोलीका संयोजक डा अरुना अबेदीले दोस्रो केस फेला परेको पुष्टि गरेका हुन् । इबोला नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । गोमा यातायातको हब, राज्यको मुख्य सहर भएको र बाक्लो बस्तीका कारण संक्रमण चाँडै फैलन सक्ने भएकोले पनि विशेष ध्यानकर्षण गराइएको जनाइएको छ । सीमा जोडिएकोले मानिसहरु आवतजावत गरिरहेने भएकोले रुवान्डाको गिस्नयी सहरमासमेत इबोलाको संक्रमण फैलनसक्ने जनाइएको छ ।
तर, रुवान्डा भने अहिलेसम्म इबोलाको भाइरस नभेटिएको दाबी गरिएको छ । रुवान्डामा सावधानीका लागि उपचार केन्द्र र २३ वटा परीक्षण केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिएको छ । छिमेकी मुलुकमा चाँडै यसको संक्रमण फैलनसक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
के हो इबोला ?
इबोला एक प्रकारको भाइरस हो । जसको संक्रमणबाट ज्वरो आउने, कमजोरी महसुस हुने, मांशपेशी दुख्ने र गला सुन्निने हुन्छ । संक्रमणको केही दिनपछि भोमिट हुने, झाडापखाला हुने र आन्तरिक तथा बाह्य रक्तश्राव हुन्छ । कुनै संक्रमित व्यक्तिको काटिएको छालासँग सिधा सम्पर्क भएमा, मुख, नाक तथा रगत र भोमिटबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । इबोला संक्रमण भएपछि शरीरमा पानीको अभाव हुने र विभिन्न अंगले काम गर्न छोडेपछि विस्तारै मानिसको मृत्यु हुनसक्छ ।
डब्लुएचओले इबोलाको संक्रमण निर्मुल पार्नका लागि पैसा अभाव भएको जनाएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि करिब ९८ मिलियन डलर आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म ५४ मिलियन डलर कमी भएको बताएको छ ।
मनमोहन मेमोरियल यू–१६ क्रिकेट: उपाधि प्रदेश २को पोल्टामा मंगलवार, बैशाख २४, २०७६, १५:४९:००
कुरीति तोड्दै श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीले लगाईन् रातो लुगा बुधवार, मंसिर १२, २०७५, ०७:४१:००
सगरमाथाको आधार शिविरमा भोक हड्ताल बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६, १०:१९:००